စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာစိန်ခေါ်မှုများ | Martech Zone
Startup များသည် သာမာန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာစိန်ခေါ်မှုများကို မည်သို့ကျော်လွှားနိုင်မည်နည်း။
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 8 ရက်၊ 2021 ခုနှစ် သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 12, 2021 Thibaut de Lataillade
"စတင်ခြင်း" ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် လူအများအမြင်တွင် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ စတိုင်ကျသော ရုံးခန်းနေရာများနှင့် အကန့်အသတ်မရှိ တိုးတက်မှုများကို လိုက်ဖမ်းနေသည့် စိတ်အားထက်သန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ရုပ်ပုံများကို လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။
သို့သော် နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများသည် startup စိတ်ကူးယဉ်မှု၏နောက်ကွယ်တွင် ဆွဲဆောင်မှုနည်းသော အမှန်တရားကို သိကြသည်- စျေးကွက်တွင် ခြေကုပ်ယူရုံဖြင့် တက်ရန် ကြီးမားသောတောင်ကုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
At GetAppလုပ်ငန်းစတင်သူများနှင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကြီးထွားရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ပန်းတိုင်များသို့ နေ့စဉ်ရောက်ရှိရန် လိုအပ်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပြီး လမ်းတစ်လျှောက်တွင် လုပ်ငန်းကြီးထွားမှုစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဖြေရှင်းနည်းများအကြောင်း အရာအချို့ကို လေ့လာသိရှိထားပါသည်။
အထူးသဖြင့် startup များကိုကူညီရန်၊ မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Startup ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ် - ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းစတင်တည်ထောင်သူအသိုက်အဝန်း - startup ခေါင်းဆောင်များ၏အပြင်းထန်ဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်။ ဤခေါင်းဆောင်များထံမှ မကြာခဏကြားရသည့် ရုန်းကန်မှုများသည် ထိရောက်သောအွန်လိုင်းတည်ရှိမှုကို တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ရှာဖွေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အရင်းအမြစ်အကန့်အသတ်ရှိသော စတင်တည်ထောင်သူအနေဖြင့် အဖိုးတန်အရင်းအမြစ်များကို မဖြုန်းတီးဘဲ မှန်ကန်သောနည်းပညာကို ရှာဖွေရာတွင် အွန်လိုင်းတွင် သင်မည်သို့သတိပြုမိနိုင်မည်နည်း။
အဖြေမှာ ထိရောက်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး နည်းပညာ (martech) stack တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ GetApp ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ ဤသည်မှာ သာမန် martech စိန်ခေါ်မှုများကို ကြိုတင်မျှော်လင့်ပြီး ကျော်လွှားနိုင်ရန် ကူညီရန် ကျွန်ုပ်၏ အကြံပြုချက် သုံးခုဖြစ်သည်။
အကြံပြုချက် 1- သင်၏ Martech ကို ထိရောက်စေလိုပါသလား။ မင်း လိုအပ်ချက် အစီအစဉ်တစ်ခုရှိရန်
startup ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ အဲဒါကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၉၀% နီးပါး1 martech tools တွေကို အခွင့်ကောင်းယူနေကြပါပြီ။ အခွင့်ကောင်းမယူသောသူတို့သည် အားကိုးရာမဲ့၊ martech မဟုတ်သောအသုံးပြုသူ ထက်ဝက်ကျော်သည် ပြင်ပစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီထံမှ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကူအညီကို ရယူနေပါသည်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဂိမ်းအစီအစဉ်က ဘာလဲ။
Martech ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းစတင်သည့် လုပ်ငန်းများအား ၎င်းတို့တွင် အစီအစဉ်ရှိ၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်နေပါသလားဟု မေးမြန်းသောအခါ 40% ကျော်က ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို တွန်းအားပေးနေကြသည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းသည် ထိရောက်သော martech stack ကိုအောင်မြင်ရန် ကြီးမားသောအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ GetAppအဲဒါကို စတင်လုပ်ဆောင်တဲ့ စစ်တမ်းမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ martech အစီအစဥ်မရှိသော startup များသည် ၎င်းတို့၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များကို မပြည့်မီဟု ဆိုနိုင်သည်ထက် လေးဆပိုများသည်။
သင့်လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးလိုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းရလဒ်များသည် ထိုနေရာသို့ရောက်ရှိရန် အလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားသော လမ်းပြမြေပုံကိုရေးဆွဲပေးသည်- martech အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီး ၎င်းကို လိုက်နာပါ။
နောက်အဆင့်များ သင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ဝှမ်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အစီအစဥ်အစီအစဥ်အဖွဲ့ကို စုစည်းကာ၊ ၎င်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အချိန်ဇယားနှင့်အတူ သင်လိုအပ်သည့် ကိရိယာအသစ်များကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် စတင်အစည်းအဝေးတစ်ခုကို အချိန်ဇယားဆွဲပါ။ ၎င်းတို့သည် သင့်လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရန် ကူညီပေးဆဲဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် လက်ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးရန် သင့်အစီအစဉ်တွင် အဆင့်တစ်ဆင့် ထည့်သွင်းပါ။ သင့်အစီအစဉ်ကို သက်ဆိုင်သူအားလုံးနှင့် မျှဝေပါ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်သလို ချိန်ညှိပါ။
အကြံပြုချက် 2- သေချာပါသည်၊ Martech ကိရိယာများသည် လွှမ်းမိုးနိုင်သော်လည်း အောင်မြင်မှုဆီသို့ လမ်းကြောင်းတစ်ခု ရှိနေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် ကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆော့ဖ်ဝဲသည် အတွေ့အကြုံရှိသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏လက်တွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် အစွမ်းထက်နိုင်သော်လည်း ခေတ်မီသောအင်္ဂါရပ်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များစွာ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက်လည်း လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သော startup ခေါင်းဆောင်များသည် အသုံးမပြုသော နှင့် ထပ်နေသောအင်္ဂါရပ်များကို ကိုးကားပြီး ၎င်းတို့၏ထိပ်တန်း martech စိန်ခေါ်မှုအချို့အဖြစ် martech ကိရိယာများ၏ အလုံးစုံရှုပ်ထွေးမှုအပေါ် မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အဆိုပါကိရိယာများ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ထိုက်တန်သည်။ တူညီသော startup ခေါင်းဆောင်များသည် ထိရောက်သော martech stack ၏ ထိပ်တန်းအကျိုးခံစားခွင့်များအဖြစ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖောက်သည်ပါဝင်မှု၊ ပိုမိုတိကျသော ပစ်မှတ်ထားမှုနှင့် ပိုမိုထိရောက်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လှုံ့ဆော်မှုများကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုလျှံမှု၏ စိတ်ပျက်စရာများနှင့် အဆင်မပြေမှုများကို လျှော့ချရင်း သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို သင်မည်ကဲ့သို့ ခံစားနိုင်မည်နည်း။ နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် martech stack audit သည်စတင်ရန်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင့်အားငါပြောနိုင်သည်။
သုံးစွဲသူများအတွက် အပိုလေ့ကျင့်မှုအချို့သည် သင်၏ martech tools များကို demystify လုပ်ရန်အတွက် ခရီးဝေးသွားနိုင်သည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သင့်လျော်သော martech အစီအစဉ် ပထမနေရာ၌ သင့်လျော်သော ရှုပ်ထွေးသောကိရိယာများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အဆိုပါပြဿနာအချို့ကို ဖြတ်ကျော်ရာတွင် ကူညီပေးသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သော စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များသည် အဆိုပါ martech စိန်ခေါ်မှုများကို မည်ကဲ့သို့ တုံ့ပြန်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်ချက်အချို့ကိုလည်း ပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်ကို ဖန်တီးရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပြီး အလားတူစိန်ခေါ်မှုများကို သင်ကြုံတွေ့ရပါက-
နောက်အဆင့်များ သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာအသစ် (အိမ်တွင်းဖန်တီးသူ သို့မဟုတ် သင့်ရောင်းချသူမှ ပံ့ပိုးပေးသည်) အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်စာရွက်စာတမ်းများကို စုဆောင်းပြီး အသုံးပြုသူများအားလုံးကို မျှဝေပါ။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကို အချိန်ဇယားဆွဲပြီး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို ဦးဆောင်ပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းရန် စူပါအသုံးပြုသူများကို သတ်မှတ်ပါ။ အသုံးပြုသူများသည် မေးခွန်းများမေးနိုင်ပြီး သင်၏ martech ကိရိယာများဖြင့် အကူအညီရယူနိုင်သည့် သင်၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတူးလ်တွင် ချန်နယ်တစ်ခုကို စနစ်ထည့်သွင်းပါ။
အကြံပြုချက် 3- သင်အောင်မြင်လိုပါက Martech ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်၏ အနည်းဆုံး 25% ကို ဘေးဖယ်ထားပါ။
သင်၏ martech ဗျူဟာကို ရေးဆွဲသည့်အခါ၊ လက်တွေ့ကျသော ဘတ်ဂျက်ကို ဆုံးဖြတ်ပြီး ၎င်းကို လိုက်နာရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဘတ်ဂျက်ချွေတာရန် martech ၏အသုံးစရိတ်ကို လျှော့ချခြင်းသည် ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း လစ်လျှောခြင်းသည် သင့်လုပ်ငန်းကို နောက်ကျကျန်စေပြီး ရပ်တန့်သွားမည့်အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပေါ် စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းသည် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရသော startup များ၏ 65% သည် martech တွင် ၎င်းတို့၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်၏ လေးပုံတစ်ပုံကျော်ကို martech တွင်အသုံးပြုသည်ဟု သုံးသပ်ကြည့်ပါက ၎င်းတို့၏ stack သည် လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များနှင့်ပြည့်မီသည်ဟု သုံးသပ်ကြည့်ပါ တောင်းဆိုမှု။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေဆိုသူ 13% ကသာ ၎င်းတို့၏ဘတ်ဂျက်၏ 40% ကျော်ကို martech တွင်အသုံးပြုပါသည်။ ဤအချက်အလက်ကိုအခြေခံ၍ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်၏ 25% နှင့် 40% အကြားတစ်နေရာကို martech သို့ မြှုပ်နှံခြင်းသည် သက်တူရွယ်တူ စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပတ်သက်နေသရွေ့ သင့်လျော်သောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Startup Budget များသည် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း ဤတွင် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် martech တွင် အမှန်တကယ် သုံးစွဲနေပုံနှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ် စစ်တမ်းဒေတာ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။
startup များ၏ 45% သည် $1,001 – $10,000/လ သုံးကြသည်။
စတင်မှု၏ <20% သည် တစ်လလျှင် $10,000+ သုံးသည်။
startup များ၏ 38% သည် တစ်လလျှင် $1,000 အောက်သုံးသည်။
လုပ်ငန်းစတင်သူများ၏ 56% သည် အခမဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆော့ဖ်ဝဲ/ အခမဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတူးလ်အချို့ကို အသုံးပြု၍ အစီရင်ခံပါသည်။
တရားမျှတစေရန်အတွက်၊ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါသည် ကဏ္ဍအားလုံးတွင် ဘတ်ဂျက်များကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တွေ့ခဲ့ရတာတောင်၊ startup ခေါင်းဆောင်များ၏ 63% သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ martech ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးလာခဲ့သည်။. ထိုကာလအတောအတွင်း ၎င်းတို့၏ martech ဘတ်ဂျက်ကို ငါးရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ လျှော့ချခဲ့သည်။
နောက်အဆင့်များ သင့်ဘတ်ဂျက်ကို ထူထောင်ပြီးနောက် အနည်းငယ်ကို စမ်းသပ်ပါ။ အခမဲ့ကိရိယာများ / အခမဲ့စမ်းသပ်မှုများ သင့်အဖွဲ့အတွက် ကောင်းမွန်သည့်အရာများကို ကြည့်ရှုရန်။ မည်သည့် martech ကိရိယာများဖြင့် စတင်ရမည်ကို တွေးနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းတွင် A/B စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဝဘ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်နှင့် CRM ဆော့ဖ်ဝဲလ်များသည် လုပ်ငန်းစတင်သူများအား ၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပန်းတိုင်များရောက်ရှိစေရန် ကူညီပေးရာတွင် အထိရောက်ဆုံးသောကိရိယာများဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်တမ်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒေါင်းလုပ် GetAppStartups လမ်းညွှန်အတွက် မရှိမဖြစ် Martech Stack တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခြင်း။
သင်၏ Martech Stack ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် အဆင့်4ဆင့်
စတင်တည်ထောင်သူအနေဖြင့် အရေးကြီးသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုရောက်ရှိခြင်းသည် အဓိကကျသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်နှင့် ထိရောက်သော martech stack သည် ထိုနေရာသို့ရောက်ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤသည်မှာ သင်နှင့်ဝေးကွာသော ဤနေရာတွင် မျှဝေထားသော အကြံဉာဏ်ကို ယူဆောင်ရန် အဆင့်လေးဆင့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်-
Martech အစီအစဉ်တစ်ခု ပြုလုပ်ပါ- သင့်အဖွဲ့ကို စုစည်းပါ၊ သင်လိုအပ်သည့် ကိရိယာများကို ဆုံးဖြတ်ပါ၊ အကောင်အထည်ဖော်မှု အစီအစဉ်နှင့် အချိန်ဇယားကို ရေးဆွဲပါ၊ သင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် မျှဝေပါ။ ပုံမှန်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်သလို ချိန်ညှိပါ။
အောင်မြင်မှုအတွက် သင့်အဖွဲ့ကို နေရာချထားပါ- သင့်အဖွဲ့အား သင်၏ martech stack ကို တတ်နိုင်သမျှ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ၎င်းတို့အား ကူညီရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိရိယာများနှင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ရောင်းချသူ ဦးဆောင်သော လေ့ကျင့်ရေးများ ပေးဆောင်ပါ။
လက်တွေ့ကျသော ဘတ်ဂျက်တစ်ခု ဖန်တီးပြီး ၎င်းကို လိုက်နာပါ- အကယ်၍ သင်သည် နည်းပညာအတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်၏ 25% အောက်ကို သိသိသာသာ သုံးစွဲနေပါက၊ သင်သည် သင်၏ပြိုင်ဘက်များနောက်သို့ လိုက်သွားနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ထိရောက်မှုရှိသရွေ့ သင်၏ martech stack တွင် အခမဲ့တူးလ်များ ထည့်သွင်းရန်မှာလည်း အဆင်ပြေကြောင်း သတိရပါ။
သင်၏ martech stack ကိုစစ်ဆေးပါ- သင့်ကိရိယာများသည် သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစပျိုးမှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် သင်၏ martech stack နှင့် စစ်တမ်းအသုံးပြုသူများကို အခါအားလျော်စွာ (အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်) စစ်ဆေးပါ။ အသုံးမပြုသော ကိရိယာများကို ဖယ်ရှားပြီး ထပ်နေသည့် အင်္ဂါရပ်များကို စုစည်းပါ။ မပြည့်စုံသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းရန် ကိရိယာအသစ်များ (ဖြစ်နိုင်လျှင် အခမဲ့အစမ်းသုံးခြင်း) ကို စမ်းသပ်ပါ။
ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် rooting ပြုလုပ်နေပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဘေးကနေ အားပေးရုံထက် ပိုလုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အပါအဝင် သင်၏စတင်မှုပန်းတိုင်များရောက်ရှိစေရန် ကူညီပေးမည့် အခမဲ့ကိရိယာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖန်တီးထားပါသည်။ AppFinder ကိရိယာ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးအစားခေါင်းဆောင်များ အခြေခံ အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူ သုံးသပ်ချက် တစ်သန်းကျော်.
သူတို့ကိုစစ်ဆေးပါ၊ နှင့် ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေ လမ်းတလျှောက် မင်းကိုကူညီဖို့ နောက်ထပ်တစုံတရာ ရှိသေးတယ်ဆိုရင်။
1GetApp's 2021 စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာစစ်တမ်းကို 18 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 25-2021 ရက်၊ 238 ခုနှစ်အတွင်း ဖြေဆိုသူ XNUMX ယောက်တွင် startups များမှ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်။ ဖြေဆိုသူများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး/CRM၊ လက်လီ/အီလက်ထရောနစ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်/ဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သို့မဟုတ် AI/ML တို့တွင် ဦးဆောင်သူများ၏ ရာထူးများအတွက် စိစစ်ခဲ့သည်။
GetApp၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ stack ထိရောက်မှုမေးခွန်းတွင် အောက်ပါရွေးချယ်မှုအားလုံးပါဝင်သည် (အလေးချိန်တွက်ရမှတ်များအလိုက် ထိရောက်မှုအစီအစဥ်ဖြင့် ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်- A/B သို့မဟုတ် အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်ခြင်း၊ ဝဘ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်၊ ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (CRM)၊ Multi-touch ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်း၊ မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်း၊ ဝဘ်ဆိုဒ်တည်ဆောက်ရေးကိရိယာများ၊ ဖောက်သည်ဒေတာပလပ်ဖောင်း (CDP)၊ ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေး (SEO/SEM)၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်းပလပ်ဖောင်း၊ သဘောတူညီချက်နှင့် ဦးစားပေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ စစ်တမ်း/ဖောက်သည် အတွေ့အကြုံပလပ်ဖောင်း၊ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (CMS)။ multichannel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်း၊ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်း၊ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကြော်ငြာများ၊ ဝန်ထမ်းထောက်ခံအားပေးရေးကိရိယာများ။
Tags: 2021 စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာစစ်တမ်းappfinderအခမဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာစမ်းသပ်မှုများအခမဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး stackစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာmartech အကောင်အထည်ဖော်မှုmartech အစီအစဉ်Martech stackmartech stack စာရင်းစစ်martech stack ဘတ်ဂျက်startup martech ဘတ်ဂျက်startup martech stack
Thibaut De Lataillade၊ GetApp GVP၊ သူ၏ခါးပတ်အောက်တွင်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် ၂၅ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ သူ့တွင် cloud၊ ရွေ့လျားမှု၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်း၊ CRM၊ မားကတ်တင်း၊ အရောင်းနှင့် တိုးတက်မှုဗျူဟာများတွင် သက်သေပြထားသော ခြေရာခံမှတ်တမ်းတစ်ခုရှိသည်။ Thibaut သည် Cegedim နှင့် SAP ကဲ့သို့သော နည်းပညာကုမ္ပဏီများတွင် မန်နေဂျာနှင့် အမှုဆောင်ရာထူးများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။